Netflix 2016 တွင်အကောင်းဆုံးဟယ်လိုဝင်းရုပ်ရှင်: Sweeney Todd - Netflix ရုပ်ရှင်
Netflix 2016 တွင်အကောင်းဆုံးဟယ်လိုဝင်းရုပ်ရှင်: Sweeney Todd: ရေယာဉ်လမ်း၏ Demon ဘာဘာ
အမေရိကန်သရုပ်ဆောင် Johnny Depp (R) နှင့်အမေရိကန်ဒါရိုက်တာ Tim Burton တို့သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင်ပါရီမြို့၌ Burton ၏ 'Sweeney Todd' ရုပ်ရှင်အသစ်ကိုတရားဝင်တင်ဆက်သည်။ စတီဖင် Sondheim ၏ဆုရဂီတသည်းထိတ်ရင်ဖိုဖြစ်မှုကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ထားသောဤရုပ်ရှင်သည်နောက်ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင်ပြသမည်ဖြစ်သည်။ ဂျော်နီ Depp သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင်ပထမဆုံးရွှေကမ္ဘာလုံးဆုရရှိခဲ့ပြီး Burton ရုပ်ရှင်၌လည်ချောင်းနာခြင်းဆံပင်ပုံဖော်ခြင်းအတွက်ဂီတသို့မဟုတ်ဟာသဆုတွင်အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ဆုရရှိခဲ့သည်။ AFP PHOTO PIERRE VERDY (ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ်သည် PIERRE VERDY / AFP / Getty Images ကိုဖတ်သင့်သည်)
ဘယ်အချိန်မှာ Crashing ရာသီ2Netflix တွင်ပေါ်လိမ့်မည်နည်း Broadchurch ရာသီ3သည် Netflix တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်ရောက်ရှိမည်နည်း။
Sweeney Todd: Flle Street မှ Demon ဘာဘာသည် Johnny Depp နှင့် Helena Bonham Carter တို့ပါဝင်သဖြင့် 2016 ခုနှစ်တွင် Netflix ရှိအကောင်းဆုံးဟယ်လိုဝင်းရုပ်ရှင်များတွင်ပါဝင်သည်။
ဒီနေ့ကျနော်တို့ featuring နေကြသည် Sweeney Todd: ရေယာဉ်လမ်း၏ Demon ဘာဘာ Netflix ရှိအကောင်းဆုံးဟယ်လိုဝင်းရုပ်ရှင်များစာရင်းတွင်! နောက်ဆုံးရက်အနည်းငယ်အတွင်းသင်သတိမပြုမိပါကနေ့ရက်များကိုဟယ်လိုဝိန်းပွဲသို့ရေတွက်တွက်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်နေ့တိုင်းမတူသောရုပ်ရှင်တစ်ကားကိုပြသနေပါသည်။
Sweeney Todd: ရေယာဉ်လမ်း၏ Demon ဘာဘာ Hugh Wheeler နှင့် Stephen Sondheim ရေးသားသောနာမည်တူဂီတကိုအခြေခံသည်။ John Logan သည်ဂီတကိုဇာတ်ညွှန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းနှင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်ပြဇာတ်ရုံများတွင်ပြသခဲ့သည်။
Johnny Depp၊ Helena Bonham Carter၊ Alan Rickman၊ Timothy Spall နှင့် Sacha Baron Cohen တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။
ဒီရုပ်ရှင်ကိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံ ၁၈၀၀ ပြည့်နှစ်မှာစတင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး Sweeney Todd (Johnny Depp) ဆိုတဲ့ရွာကိုစွန့်ခွာထွက်ခွာပြီးမြို့တရားသူကြီးကိုဖြတ်ကျော်တဲ့အတွက်ထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြပါတယ်။ နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ထိုသူသည်နာမည်အသစ်ဖြင့်ပြန်လာပြီးသူ့ကိုဆံပင်ညှပ်သူအဖြစ်အနိုင်ကျင့်သူများကိုလက်စားချေခဲ့သည်။
ဒီမှာနောက်တွဲယာဉ်ကိုကြည့်ပါ Sweeney Todd!
Tim Burton ၏ရုပ်ရှင်အတော်များများသည် Netflix တွင်ရှိပြီး Netflix 2016 ရှိအကောင်းဆုံးဟယ်လိုဝင်းရုပ်ရှင်များတွင်လည်းပါဝင်သည် Sleepy Hollow နှင့် အလောင်းသတို့သမီး။ ကံမကောင်းစွာပဲ ခရစ်စမတ်မတိုင်မီအိပ်မက်ဆိုး Netflix ပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ငါ့အတွက် Sweeney Todd Burton ရဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်သည်!
နောက်တစ်ခု:Netflix 2016 တွင်အကောင်းဆုံးဟယ်လိုဝင်းရုပ်ရှင်
သင်စောင့်ကြည့်ပြီးနောက် Sweeney Todd: ရေယာဉ်လမ်း၏ Demon ဘာဘာ streaming များ ၀ န်ဆောင်မှုတွင် Netflix 2016 ရှိအကောင်းဆုံးဟယ်လိုဝင်းရုပ်ရှင်များ၏ကျန်စာရင်းများကိုဤဟယ်လိုဝိန်းကြည့်ရှုရန်အတွက်အလွန်ကောင်းသောရုပ်ရှင်များအတွက်ကြည့်ရှုပါ။
ဘယ်အချိန်မှာ ozark ၏ရာသီ3ဖြန့်ချိလိမ့်မည်
ကျေးဇူးတော်နှင့် Frankie ပြန်လာနေ့စွဲ
အမေရိကန်ထိတ်လန့်မှုဇာတ်လမ်းတွဲအပိုင်း ၆ ကိုကြည့်ပါ
တဖက်ရာသီ2streaming များ Netflix